isaha Isiyingi - a steel disc nge imakwe emphethweni waso bezihlahla kanye izikhala phakathi kwawo - sinuses. Zingase ngifane ingxubevange nokunamathisela ngomthofu kanzima ezingaphezu kuka substrate, noma ukusika isikhunta zomzimba. Ibanga ezihluthulelwe amathuluzi ngokuthi indandatho gear kanye drive ukusika - indwangu. Ngaphambili ebusweni izinyo ngalinye - front ubuso nengemuva ubizwa ngokuthi emuva. Ibanga phakathi iphakama eduze ngokuthi amazinyo isinyathelo. Ngo ezihluthulelwe ezivamile zonke toothing siqukethe okufanayo iphimbo kanye ukuphakama amagugu. Ngenxa yalokho umsebenzi, isandla babona isiyingi propyl eshiya ngokhuni - igebe igudle izinhlangothi ezintathu.
Ukulola ikhaba isaha, futhi kokuqeda amazinyo akhe nge Carbide-okulinganiswa, wenziwa esebenzisa olwalwenza (carborundum) imibuthano. Indlela ingahlanganiswa: a (indawo) inqubo yokuqala Abrasives kanye yokuqedela - ngamathuluzi idayimane. Ukuze alondoloze bezihlahla Carbide kanye izakhiwo isondo ukugaya, le pretreatment Kwenziwa ngezithukuthuku ubude kuwebhu - ohlangothini emuva, njengoba mncane - ngezihluthu.
Ukulola ikhaba isaha ohlangothini reverse is sanded steel ingxenye ithuluzi i-α engela + 6 °. I ipuleti ezondile inqubo esebenzisa Carbide engela α + 2 °, saqeda ukuthi ingxenye plate ukuthi eyakhelene ikhaba - i-engeli α. Ngaphambili ubuso icutshungulwe imimese kwangaphambilini kanye ubude egcwele nokunamathisela ngomthofu ipuleti yokugcina - ohlangothini front (kuncike isicelo yenqubo yokuqedela ukuthi kumele kwenziwe nge Ukupholisa okuqhubekayo). Nokho, i-isondo idayimane ukugaya esekelwe base bakelite kungamukeleka elola ikhaba isaha ku kwimodi ejwayelekile.
On imishini yesimanje ezisebenzisa amathuluzi uhlobo kuhlanganiswe (okusanhlamvu amafraktjhini ezimbili - nge diamond Abrasives), imimese wenziwa ne Ukupholisa ngomoya okuqhubekayo endaweni pass olulodwa nokukhishwa anezingane ngu 0.25 mm. Kube Carbide wabona izindwani, lapho ipuleti isetshenziswa processing kabili emaceleni. Rearranging, basebenzela nhlangothi zombili, wabe esenikwa ukucubungula ukukhiqiza indwangu entsha. Lokhu elola babona isiyingi lula kakhulu ithuluzi yesondlo ngenxa yinye kanye nokuhlanganiswa amabhizinisi esetshenziswa.
Uma disc ubuso ngemuva izinyo senziwa flat kanye imimese wenziwa kuwo izingqimba parallel kanye ithuluzi ukugqoka ezingemuva iloliwe engela yayo, kodwa ngesikhathi inombolo ethile regrinding, izingozi ekubeni angamukelekile ongaphakeme. Yiqiniso, ungakwazi ukubhekana izinyo eduze indiza ngemuva emapheshana oyoqhubeka kuye emthambekeni. Kodwa ngezinga elithile okunjalo ngeke kuholele kuncipha engela imimese nokulahlekelwa ngamabomu ngokunemba umsiki. Ukuqinisekisa ukuthambekela njalo, ebusweni emuva iphathwa ngokuvumelana omunye ezintathu okukhethiwe laying Curves ngendlela Kuvunguza Archimedean, Kuvunguza logarithmic ngokusebenzisa noma eduze arc isiyingi okuvela isikhungo dengwane. Indlela yokugcina kabanzi alole ezihluthulelwe "Interskol".
Ukuze usekele kwezimo ezivamile elola ukunquma nentaba of the izingxenye izinyo izindwani ukuthi zitholakala indiza leaf ujikeleza noma ahlelwe eduze ke, uhlele engela backlash ngokusebenzisa etshekile kokuphenduka lateral ka ezingemuva blade odongeni (njengoba in ezivamile planing blade).
Ithawula dryer: okuyinto engcono? Ukubuyekeza, izithombe. Yini kungcono ukukhetha ithawula amanzi ukufudumala - "Sunerzha" noma "Margaroli"?
Dry Ukupholisa umbhoshongo - ukupholisa uketshezi Drycoolers
Imikhiqizo yenkampani Fubag: ugesi. Ukubuyekeza, ukuqondisa
Boer Ukhonkolo: izinhlobo kanye nethuluzi injongo
Band Saw Makita LB1200F: incazelo, imfundo, injongo, ukubuyekezwa
Indlela yokwenza ifenisha JIG ngezandla zakhe?
Kazan Victory Park. Kazan ezikhangayo
Bolero: iphethini namathiphu lokuthunga
Arnis Litsitis: Biography, Filmography, empilweni yakho
Isiqhingi Beach Resort Indawo abantu (Greece / neCorfu): izibuyekezo, izilinganiso, izithombe
Painting "L'Oreal Prodigy": ukubuyekezwa. upende okusha "Loreal Prodigy"
Thola hamsters eziningi kanjani bukhoma
Federal District: amahhotela iphendukele
Indlela bayamba umgodi endaweni yabo?
Dangerous esingaphezu hernia inguinal emankazaneni?
Kanjani ngokushesha Sober up? - Amathiphu ezivela emhlabeni wonke
Uchungechunge lwezihloko ezithi "Kingdom Weshumi": nabalingisi, inkinga lekhona endzabeni, ezithakazelisayo amaqiniso ngokudubula